दुई पटक मात्रै बिश्वकप जितेको उरुग्वेको जर्सीमा किन ४ स्टार ? | Kendrabindu Nepal Online News
दुई पटक मात्रै बिश्वकप जितेको उरुग्वेको जर्सीमा किन ४ स्टार ?
२२ असार २०७५, शुक्रबार ११:५२
रसियामा जारी बिश्वकप २०१८ अन्तर्गत आज उरुग्वे र फ्रान्सबीच खेल हुँदैछ । यो खेल बेलुका ७ः४५ बजे हुनेछ । यी दुबै टिम बिश्वकप बिजेता टिमहरु हुन् । त्यस्तै राती ११ः४५ बजे ब्राजिल र बेल्जियम भिड्दै छन् ।
बिश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिश्वकप जितेका टोलीलाई जति पटक बिश्वकप जितेको छ त्यहि नै संख्याको ‘स्टार’ आफ्नो जर्सीमा राख्न अनुमति दिएको छ । त्यसैले बिश्वकप् जित्ने हरेक टोलीको आफ्नो लोगोमाथि बिश्वकप जितेको संख्याको आधारमा ‘स्टार’ हुन्छ ।
यसै अनुसार ब्राजिलको ५ ‘स्टार’ छ भने ४ पटक बिश्वकप जितेका इटाली र जर्मनीको समान ४/४ ‘स्टार’ छ । तर २ पटक मात्र बिश्वकप जितेको उरुग्वेको जर्सीमा पनि ४ ‘स्टार ‘छ । धेरै खेलप्रेमीको मनमा यो आश्चर्यजनक जिज्ञासा उब्जिएको छ । उरुग्वेले जवरजस्ती फिफाको नियम मिचेको हो कि फिफाको ध्यान नपुगेको हो भन्ने धेरैले अनुमान गर्ने गरेका छन् । तर खास कारण त्यस्तो होईन ।
उरुग्वेको जर्सीमा ४ ‘स्टार’ हुनुको पछाडी एक रोचक प्रसङ्ग छ । उरुग्वेले पहिलो पटक सन् १९३० र दोस्रो पटक १९५० मा बिश्वकप जितेको थियो । १९३० को प्रतियोगिता पहिलो बिश्वकप थियो । तर उरुग्वे बिश्वकप प्रतियोगिता सुरु हुनु भन्दा अगाडि नै २ पटक बिश्व च्याम्पियन बनिसकेको थियो । बिश्वकप सुरु हुनुभन्दा पहिले नै भएको प्रतियोगितालाई बिश्वकपको मान्यता किन त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
बिश्वकप सुरु हुनु अगाडि उरुग्वेले २ पटकका ओलम्पिक खेल जितेको थियो । त्यो प्रतियोगितालाई फिफाले ‘फिफा वल्ड च्याम्पियनसिप’ को मान्यता दिएको थियो । यसै च्याम्पियनसिप अन्तर्गत उरुग्वे १९२४ र १९२८ मा बिजयी भएको थियो । फिफा कै नियममा रहेर फिफाकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रतियोगिता भएको कारणले नै फिफाले यसलाई पनि बिश्वकप सरहको मान्यता दिएको हो ।
यहि कारण २ पटक मात्र बिश्वकप जितेको उरुग्वेले जर्सीमा ४ ‘स्टार’ राख्ने सौभाग्य पाएको छ । फुटबल जगतमा यस्तो अवसर पाउने उरुग्वे मात्रै एउटा सौभाग्यशाली देश हो ।
Urugey jersey, urugey jersey4star
Prevहामी सक्षम नागरिक उत्पादनमा सक्रिय छौं (भिडियो कुराकानी)
बिश्वकप: आजको खेलमा ६ र ७ को संयोग नै संयोगNext